Duufanta ONE Oo Ku soo Wajahan Waqooyga iyo Bartamha Somalia & Hey’adaha oo ku baaqay Foojignaan dheeri ah. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Duufanta ONE Oo Ku soo Wajahan Waqooyga iyo Bartamha Somalia & Hey’adaha oo ku baaqay Foojignaan dheeri ah.
Ahmed weheliye Gaashaan 17 May 2018
Muqdisho ( Mareeg News ) Duufaan xoog leh oo loo bixiyay ONE ayaa ka soo kacaysa waqooyiga badwaynta Hindiya waxaana la filaya in ay saamayn doonto inta badan gobollada Jamhuuriya iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland iyo Puntland 24 ilaa 48 saac ee foodda inagu soo haysa, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha ee FAO.
Hay’addu waxay intaas ku dartay in duufaantaas ay wehelin doonaan robaab mahiigaanno ah.
Waxaa kale oo la saadaalinayaa in ay deegannadaas ay daadad ka dhici doonaan, sida ay shaacisay hay’adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan ee Qaramada Midoobay.
Deeganno badan oo dhulka Soomaalida ah ayaa haddaba la sii daalaa dhacaya daadad iyo fatahaado ka dhashay roobab mahiigaanno ah oo da’ay.
Hey’adaha ayaa sheegay in loo bahanyahay diyaar garoow iyo foojignaan dheeri ah waxeeyna qayaasta hey’ada tilmaamtay in duufaantan ka qasaara badantahy dufaanadii horay u dhacay.
Ma ahan markii koobaad ee duufan ay ku dhufato dhulka Soomaalida, bishii Nofembar ee 2013kii ayay ahayd markii ay duufaan waxyeelo baaxadleh ka gaysatay deegaannada Puntland iyada oo la sheegay in ay malaayiin xoolo ah ku le’deen.
ILAAHEEY HANAGA AMAANSADO.
Dabaaldaga 15 may Ee todobaadkaan socotay oo caawa lagusoo af-jaray muqdisho
AFEX slams increased attacks on Online Expression in Somaliland